छ महिनापछि खुल्दैछ पर्यटकीय नगरी पोखराको विमानस्थलः दैनिक उडानबारे पत्तो छैन - Himal Dainik
पोखरा २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १८:०९
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसकोे संक्रमणको त्रासबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले चैतको पहिलो सातादेखि आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालनको रोक यही असोज ५ गतेदेखि खुला हुँदैछ।
विगत ६ महिनादेखि अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्ने विषयमा उपत्यका बाहिर देशको प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरास्थित विमानस्थललाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा शाखाका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले दिए। प्रस्तुत छ सुवेदीसँग हिमाल दैनिकका संवाददाता बिशाल बुढाथोकीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
लामो समयदेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा असोज १ गतेदेखि खोल्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज ५ गतेबाट मात्रै सुचारु गर्ने भनेछ। किन होला?
उडानको सन्दर्भमा समाचारमा आएअनुसार, १ गतेबाट नै उडान अनुमति दिने भन्ने सुनियो । सरकारले पहिले ५ गतेबाट सुचारु गर्ने भनि गरेको निर्णय यस अघि निर्णय गरेको थियो।
उडान सेवा सुचारु गर्नका लागि कम्तिमा पनि एक हप्ताको समयसीमा राखेर निर्णय गर्नु पर्ने थियो। आज खुल्ने भन्ने बित्तिकै आज नै उडान सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छैन। यत्रो ६ महिनासम्म बन्द भएका एयरलाइन्सका जहाजहरु एकैचोटी खुलाउन र उडान सेवा सुरु गर्न सम्भव पनि छैन।
सरकारले १ गतेबाट खुला गर्ने भनेको जहाजहरुलाई मात्र नभई अल्ट्रालाइट, हेलिकप्टर, उद्दार गर्ने विमान लगायतलाई पनि अनुमति दिइएको हो। यसका लागि टावरसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, १ गते नै उडाउन नसक्नको कारण के भन्ने विषयमा अघिल्लो दिनमा निर्णय गरेर उडान गर्न सम्भव छैन।
पहिले त फ्लाइट बुक हुनुपर्यो। विमान कम्पनीहरुले फ्लाइट प्लान तयार गरेर जहाजलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। यो सबै काम एक/दुई दिनमा नै तयारी गरेर व्यवसायिक उडान गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन।
भनेपछि सेवा सुचारु गर्न कहिलेदेखि सम्भव होला त?
मैले बुझेसम्म ५ गतेका लागि मात्र बुकिङ्ग खुला गरिएको छ। त्यसभन्दा अगाडि खुलेको जस्तो मलाई लागेन। प्राधिकरणलाई खुल्ने दिनको अघिल्लो दिनमा विमान कम्पनीहरुले फ्लाइट प्लान बझुाउँछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकारणमा एयरलाइन्सहरुले बझुाउने हो।
यो महामारीको बेला पोखरा विमानस्थलको तयारी के कस्तो अवस्थामा छ?
कोेभिड–१९ को सन्दर्भमा जहाज कसरी उडाउने भन्नेबारे प्राधिकरणले एउटा निर्देशिका नैै तयार पारेको छ। त्यही निर्देशिका अनुसार सामाजिक दुरी कायम गराउने, अनिवार्य मास्क लगाउने, ज्वरो नाप्ने, यात्रुहरुको जानकारी मुलुकको हिसाबले सूचना प्रवाह गर्ने, एयरलाइन्सको काउन्टरमा बस्ने कर्र्मचारीलाई सिसाभित्र राख्ने, मार्किङ गर्ने, सिट प्लानिङ मिलाउने जस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ।
यस भन्दा अगाडि असारमा पनि सेवा सुचारु गर्ने भनिएको थियो। त्यतिबेलादेखि नै हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बिचमा चार्टर उडान पनि भएका थिए। विमानस्थल व्यवस्थापनको सवालमा हामी तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। यदी आज, भोलि नै उडान गर्न निर्देशन आयो भने पनि हामी सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा नै छौँ।
विगत ६ महिना यताको लकडाउन अवधिमा पोखराबाट कति वटा फ्लाइट भयोे?
लकडाउन आदेश जारी भएपछि अहिलेसम्म ६/७ वटा जहाज चार्टर्ड उडान भयोे । अन्य उद्दारका लागि हेलिकप्टरहरुको उडान पनि भईराखेकै छन् ।
लकडाउन अघिसम्म पोखराबाट दैनिक कति उडान हुने गर्दथ्योे?
पोखरा र काठमाडौंको दैनिक उडान नै २२ देखि २५ सम्म हुने गर्दथ्यो।
यति विषम परिस्थितिमा विमानस्थलले अबका दिनमा दैनिक कति उडानको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छ?
के कति उडान भन्ने विषय विमानस्थलको भन्दा पनि सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीहरुको हो। विमान कम्पनीले तय गरिएको निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड पालना गरेर के कति संख्यामा उडान गर्न सक्नु हुन्छ? त्यसमा भर पर्छ। मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा दैनिक एकदेखि दुई वटासम्म हुन्छ होला भन्ने हो। त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ।
यसरी गरिने उडानमा विमानलाई के कसरी डिस्इन्फेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ?
जहाज ल्याण्ड भएपछि अर्को बोर्डिङ्ग हुनभन्दा अघि एअरलाइन्सले जहाजलाई पूर्ण रुपले डिस्इन्फेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले यसको अनुगमन गर्नेछ। यात्रुहरु गइसकेपछि उहाँहरु हिँडेको, बसेको, छोईएको स्थानलाई हाइ टच एरिया (High touch area) भनिन्छ। त्यो क्षेत्रमा पूरा डिस्इन्फेक्सन गरेर मात्र अन्य यात्रुलाई भित्र प्रवेश गराउँनेछौँ। यो सबै हाम्रो निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डभित्रै पर्छ।
अधिकांश यात्रुका आफन्तजन विमानस्थलमा लिन र छोड्न आउने चलन छ। तर, अहिलेको असहज परिस्थितिमा यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ?
सम्भव भएसम्म हामीले सहजीकरण गर्छौँ। तर, सबैैलाई विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्न दिन थालियो भने विमानस्थलमा भिडभाड हुन्छ। यस्तो महामारीको बेलामा सकेसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्ने, गराउने र भिड कम गराउने नै हाम्रोे प्राथमिकता हो। लिन वा छोड्न आउने आफन्तजनहरु विमानस्थल परिसर बाहिरै बस्नु हुन्छ। पुर्याउन आउनेको हकमा गाडीलाई मात्र भित्र प्रवेश गर्न र यात्रुलाई ओरालेपछि तत्काल बाहिर पठाउने व्यवस्था गरिन्छ।
जहाजले आफ्नो क्षमता अनुसार पूरै सिटमा यात्रु बोक्न पाउने वा नपाउने व्यवस्था के छ?
सरकारको निर्णय बमोजिम प्रत्येक जहाजको ५० प्रतिशत संख्यामा मात्रै यात्रु ओसार्न दिने भन्ने हो। तर, वायुयान सञ्चालक समितिले सायद त्यो सर्तमा उडान सेवा सुचारु गर्न नसक्ने बताएका छन्। यसबारे विस्तृत जानकारी मलाई भएन।
सरकारले सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनमा पनि ५० प्रतिशत सिटमा मात्रै यात्रु राखेर यात्रा गराउँदा नियमित भाडाको थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भाडा लिन पाउने भनेजस्तै जहाजमा यहि नियम लागू हुन्छ कि के हुन्छ?
सरकारले भने अनुसार बस सेवामा जस्तोे ५० प्रतिशत थप भाडा जहाजको हकमा बढाउन मिल्दैन। जहाजको अधिकतम् भाडा तोकिएको हुन्छ। जस्तैः पोखरबाट काठमाडौंको अधिकतम् भाडा दर ५ हजार ५० सम्म हो। जसमा यात्रु सेवा र इन्धनको शुल्क निर्धारित नै हुन्छ। सबै विमान कम्पनीहरुले अधिकतम् शुल्कभित्र रहेर आफैले नै भाडा निर्धारण गर्ने हो।
गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरुको आवागमन सेवाका लागि कस्तो व्यवस्था अपनाइँदैछ?
निर्देशिका अनुसार, हामीले सकेसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई यात्रा नगर्न अनुरोध गर्ने हो। अब सिकिस्त नै भएमा विमान कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर संक्रमित भए, नभएको पहिले नै यकिन गरेपछि मात्रै पठाउँछौँ। गम्भीर विरामी, ७० वर्ष काटेका जेष्ठ नागरिकलाई सकेसम्म जहाजको यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दछौँ।
कतिपय जटिल अवस्थाका विरामीलाई पोखराका अस्पतालले नै काठमाडौं लैजान सिफारिस गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता विरामीलाई कहिले काहीँ सडकबाट भन्दा जहाजमै लैजान सहज हुने हुँदा उनीहरुको हकमा विमानस्थलले के कसरी व्यवस्था गर्छ?
त्यस्तो अवस्थामा पनि विमान कम्पनीले नै टिकट दिने वा नदिने निर्णय गर्छ। कतिपय आपतकालिन अवस्थामा हामीले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा परिस्थितिको आँकलन गरी अनुमति दिने हो।
आजकल सामान्य खुद्रा पसलहरुमा जाँदा त व्यापारीले ग्राहकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण राख्ने गरेका छन् भने अब विमानस्थलमा यस्तो व्यवस्था कसरी मिलाउनु हुन्छ?
त्यो विवरण संकलनको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। हामीले प्रत्येक एयरलाइन्स कम्पनीलाई सबै यात्रुको विवरण राख्न निर्देशन दिन्छौँ। जसमा यात्रुहरुले दुइवटा फर्म भर्नुपर्छ। एउटा स्ट्याटस् कार्ड र अर्को लोकेटर कार्ड । पहिलोमा यात्रुको स्वास्थ्य अवस्था, ज्वरो आए, नआएको व्यक्तिगत विवरण, कोभिड संक्रमण भए, नभएको अथवा पछिल्लो १४ दिनमा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहे/नरहेको विवरण यात्रुले खुलाउनु पर्छ।
दोस्रो, लोकेटर कार्डमा कुन यात्रु कहाँबाट आएको हो? कहाँ जाने हो? स्थायी, अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि गन्तव्यसम्मको सबै विवरण भर्नुपर्छ। यसरी भरिएको विवरण यात्रुले जहाजबाट झरेपछि विमानस्थलमा बुझाउनु पर्छ। यसले आवश्यक पर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ।
नियमित उडानसँगै पोखरामा पर्यटकहरुको आकर्षण बनेको अल्ट्रा-फ्लाइट पनि ठप्प छ। त्यो कहिलेदेखि सुचारु हुन्छ?
असोेज १ गतेबाट नै खोल्ने सरकारको अनुमति हो । यस सम्बन्धि अनुमति टावरले दिनुपर्छ। आजैबाट सुरु भयो भने र यात्रु आए भने टावरको अनुमति लिएर उडान गर्न सक्छन्।
विमानस्थल कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे के कस्तो व्यवस्था गरिँदैछ?
हाम्रो विषयमा भन्नु पर्दा सरकारले दिएको निर्देशिका हामीले पनि पालना गरेका छौँ। परिस्थिति हेरेर व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। सामाजिक दुरी कायम गर्दै आवश्यक कर्मचारीलाई कम भन्दा कम संख्यामा परिचालन गर्ने र अन्यलाई आवश्यक पर्दा तुरुन्तै उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। प्राविधिक, फायर स्टेशन, एअर ट्राफिक लगायतका अप्रेसनका कर्मचारीहरुलाई पालो मिलेर ड्युटी तोकिएको छ।
हवाई यात्राका लागि पी.सि.आर रिपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन?
त्यसबारे निर्देशिकामा हालसम्म केही व्यवस्था गरिएको छैन।
विमानभित्र पाइलट, एयर होस्टेज र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे के कस्तो व्यवस्था गरिँदैछ?
यो सबै विमान कम्पनीहरुले नै व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। एयर होस्टेजहरु यात्रुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने भएको कारण उनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई, फेसियल मास्क र बिमानस्थल कम्पनीहरुले यात्रुलाई पनि फेसियल मास्क दिने भनिएको छ।
अन्त्यमा थप जानकारी केही दिनु छ?
सबै कुरा भनिसकेँ। अहिलेको अवस्था पहिलेको जस्तो सामान्य छैन। त्यसैले अतिआवश्यक परेमा मात्रै हिँडडुल गरौँ। विमानस्थलमा आउँदा विमानस्थलले जारी गरिएको नियम पालना गरौँ। बिमानस्थल प्रवेश गरिसकेपछि र यात्रा अवधिभर सबैले मास्कको प्रयोग गरौ। आवश्यक पर्ने कलम, रुमालहरु आफ्नै प्रयोग गरौ। व्यक्तिगत समानहरु (Biohazard) तोकिएको स्थानमा मात्र फालौ। विमानस्थलमा सकेसम्म ट्रलीको प्रयोग नगर्रौँ। यात्रुहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण स्पष्ट भरिदिउँ। कोेही संक्रमित यात्रा गर्नु परे अथवा संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आए विमानस्थललाई खबर गरिदिएर सबैको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोगी बनौैँ।
अघिल्लोचौधरी गु्रपद्वारा अमेरिकन ब्ल्याक डेकरका सामाग्री नेपाली बजारमा विक्रि वितरण सुरु
पछिल्लोसंविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने